P2.97 Ime ụlọ Omume mgbazinye Ikanam Ngosipụta Igwe
Typedị :dị: P2.97
P2.97 Forwin Series Ime ụlọ Omume mgbazinye Ihuenyo Okwu Mmalite na Akụkụ: Ghọtara ya site na imepụta ya, P2.97 Ime ụlọ ihe omume ihe nkiri na-ahụ maka ọdịyo nke ikanam vidiyo mgbidi.
P3.91 Forwin Series Indoor Omume mgbazinye Ikanam ihuenyo
Okwu Mmalite nke Ngwaahịa
1) Iji hụ na ịdị ọcha nke eserese na ederede, jiri otu oriọna na-acha uhie uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ nwere otu ihie (± 10%) na ogologo ebili (± 2.5nm) ahọrọ.
2) A na-ebubata gluu anyị na-etinye iji kpoo elu modulu ahụ site na Sourth Korea. Ọ na-ebelata mmetụta nke agba agba. Dika nsonaazụ nke ọkụ ọkụ na-enwu enyo, ngosipụta ahụ kpochapụrụ urmbra na ghosting n'oge mgbasa ozi.
3) Anyị na-etinye ọkaibe teknụzụ nke mmechi plastik, modulu ọ bụla nke ntanetị dị ala na-erughị 0.1mm .Ya mere, ngosipụta anyị nwere ezigbo edo edo, ịdị n'otu, nke pụrụ iche na mpaghara ngosi ọkụ.
4) Ntughari modul na-eme ka ọ dị mfe ịgbakọta ma hụkwa na oche ndị ahụ mara mma.
5) Ihe isi ike na-adi mma ma ọ na-achọpụta akụkụ atọ na ntụpọ-na-ntụpọ maiterance.
6) Ọnụahịa ahụ na-asọmpi n'etiti otu ngwaahịa na ahịa ma nwee obi ike na ya.
Uru ndị ọzọ:
1 Die-casting aluminum body, ìhè arọ maka mfe njem na elu ziri ezi echichi.
2 Na-arụ ọrụ zuru oke na njikwa ọ bụla dị na ya na-enweghị mmetụ ihuenyo / nsogbu na-egbu maramara / nsogbu Mozis.
3 Na-akwado ntinye nke ịkwado / na-arịgo ala, maka ọkwa / TV show / studio, na ngwa mmemme ndị ọzọ.
4 Mgbakọ na enweghị mkpokọta.
5 Panel ihe bụ: anwụ-mgbatị aluminum, ndidi nwere ike na-achịkwa n'ime 0.2mm
6 Naanị 7.5 KG, oke ọkụ
Ime ụlọ HD mgbazinye Ikanam ihuenyo
Ahịa klaasị dị elu
Enweghị nsogbu splicing na fanless
Mechie nlele anya na mbara ikiri sara mbara
Mfe na ngwa ngwa gbakọta na disassembling
Eachinled P2.9mm Ime ụlọ HD Rental LED Screen Video Wall na-ezukọta na imepụta ọhụrụ na ụdị nke 2.97mm pixel pitch ime ụlọ dị fechaa Ikanam ihuenyo ogwe, na ugbu a na-aghọwanye na-ewu ewu na elu-ọgwụgwụ mgbazinye ahịa.
Ime ụlọ P2.97mm mgbazinye mgbapụta vidiyo vidiyo na-eji 2 n'akụkụ ụzọ nwere ike melite nkenke, nkedo na enweghị ntụpọ, ọ bụkwa ụdị ihu ihu ọhụụ zuru oke nke pụtara usoro modulu, ike na nnata kaadị nwere ike ịbụ a na-ewepụ ihu na ihu nke ngosipụta mgbidi mgbidi P2.97 mgbazinye.
Ihe ngosi P2.9mm ime ụlọ HD mgbazinye nwere ike ịbụ ihe ngosi ụzọ ngosi ọfụma dị elu nke ime ụlọ dabara nke oge ọ bụla.
Ọnọdụ ụlọ, ụlọ ihe nkiri TV, egwu egwu, ogige isiokwu, Ọrụ Egwuregwu, Ihe omume Live, klọb, ngosi, egwu, mmemme, ememme, halllọ Nzukọ, windo ụlọ ahịa ma ọ bụ ihe ngosi, ọgbakọ, Freestanding stage backdrops na ebe ndị ọzọ maka mgbasa ozi na ebumnuche ụtọ.
FORWIN Series Indoor Rental LED Screen nkọwapụta
Ihe Usoro FORWIN Usoro FORWIN
Ihe ngosi Pixe 2.976m 3.91mm
Encapsulation nke Led SMD1515 SMD2121
Ọnọdụ Nyocha 1/21 Nyocha 1/16 Nyocha
Pixe Kwa Sq.m 112,896 Pixel 65,536 Pixel
Usoro mmezi N'ihu / N'azụ Serviceable
Cabinet ihe Die Nkedo Aluminium
Nha modul (W * H) 250 * 250mm
Cabinet Size (W * H * D) 500 * 500 * 75mm
Nwee Ume 3840hz-4880hz
Agba okpomọkụ 9500K ± 500 （Mgbanwe）
Agba Ọcha Onyinye 14-16
Cabinet arọ 7.8KG / iberibe
Ihie (nits / ㎡) 1100nits
Nkezi Ike Oriri 350-400Watt / ㎡
Ikike ike Max 800Watt / ㎡
Nchedo IP IP43
Operating okpomọkụ -20 Celsius C na 50 Celsius
Volta ọrụ 100-240Volt (50-60hz) UL, CE Akwụkwọ
Ike nke ụlọ ọrụ anyị.
Dị ka a elu-tech enterprise ike na nnyocha sayensị, imewe, mmepụta, mmezi, ahịa na usoro mwekota, Shenzhen Eachinled Optoelectronics Co.Ltd na-pụrụ iche na Ikanam ngosi ihuenyo. Anyị nwere ọkachamara elu-edu oru R & D otu aku R & D nke elu-tech ngwaahịa ruo ọtụtụ afọ na ihe siri ike oru ike. Anyị nwekwara ọtụtụ ndị injinia nwere ọgaranya na mmepe ngwaahịa na ndị injinia nrụpụta. Na elu mmepụta ngwá na ule ngwá na karịsịa ndị magburu onwe ahịa otu na ọwa cooperators, anyị jikwaa ahịa mgbasa na mgbe-sales ọrụ na mkpokọta n'ụzọ.
1) Ọzụzụ mgbe iji
Mgbe enyere iwu a, a ga-enye ndị nkuzi nhazi, gụnyere iji ngwanrọ, rụọ ọrụ nchekwa, chekwaa akụrụngwa
2) Ntinye na nbughari
Anyị nwere ike izipu ndị ọkachamara ka ha rụọ ọrụ na ntinye saịtị wee debe iwu n'ụzọ siri ike yana ihe chọrọ maka atụmatụ na akwụkwọ ntuziaka mbụ.
3) Akwụkwọ ikike
Akwụkwọ ikike: 3 afọ akwụkwọ ikike, ndụ mmezi
Kwadebe ihe ndi ozo. Afọ abụọ mbụ mgbe ebupu, anyị ga-ahụ maka mmezi n'efu ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla kpatara ogo ya. Ezie na ị kwesịrị ị na-eri nke ibu ibu anyị. Mgbe afọ 2 gachara, ọrụ ka dị, mana ọ ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ, ihe onwunwe na ụgwọ na -emepụta.
Intenancekpụrụ mmezi: ịzaghachi na oge, dozie nsogbu dị iche iche ma hụ na ojiji.
Oge mmezi: N'ime oge mmezi nke ahụ gosipụtara, na-akwụghị ụgwọ mmezi niile
Mgbe mmezi oge, na-ana ihe onwunwe na-eri na ọrụ na-eri.
Nke gara aga: P6.67 N'èzí mgbazinye Ikanam Display
P3.91 Ime ụlọ Ikanam Omume Ngosipụta